विदेशीले काम गर्ने नेपाली गाउँ, गर्छन् घाँसदाउरादेखि कुटोकोदालो र गोठधन्दासम्म (भिडिओ) - Video blogging portal of Nepal
ब्याक टू नेचर :
विदेशीले काम गर्ने नेपाली गाउँ, गर्छन् घाँसदाउरादेखि कुटोकोदालो र गोठधन्दासम्म (भिडिओ)
पाेखरा । विदेशीहरु नेपाल आएर घाँसदाउरा गरेको देख्नु भएको छ ? पक्कै पनि छैन होला । यति मात्रै हो र, उनीहरु कुटोकोदालो पनि चलाउँछन् र नेपालमा गाउँले जीवन बिताउँछन् ।
रहर र अनुभव बटुल्न भएपनि युरोपबाट कयौं विदेशी यतिबेला कास्कीको डाडाँखर्क पुगेका छन् । पोखरा लेकसाइडबाट झण्डै ९ किलोमीटर माथी छ ब्याक टू नेचर रिसोर्ट । जहाँ आएर विदेशीहरु घाँसदाउरा गर्छन् । गोबर सोहर्छन् ।
डाँडाखर्कको वरीपरीबाट देखिने मनोरम दृश्यले उनीहरुको थकान मेट्छ । जे जति काम हुन्छ मन लगाएर गर्छन् । उनीहरुलाई यसो गर्दा निकै रमाइलो पनि लाग्छ ।
किनकी यस्तो गतिविधि उनीहरुले कहिल्यै गरेका थिएनन् । जंगलबाट खाँबा बोकेर आउँदाको कठिनाई होस् वा खुट्टाभरी जुका लाग्दा, अनुभव नयाँ छ ।
हामीले उनीहरुसँग भलाकुसारी पनि गर्यौं । अष्ट्रेलिया, पोर्चुगल र न्युजिल्याण्डबाट आएका विदेशी पर्यटकको एउटै सन्देश थियो– नेपाल राम्रो छ, यहाँ घुम्न आउनुस् । त्यसो त ब्याक टू नेचर रिसोर्टमा विदेशी मात्रै होइन, नेपाली पर्यटक पनि पुग्छन् ।
हामी त्यहाँ पुग्दा चिकित्सकहरुको एउटा टोली दुई दिन बसेर फर्किने तरखरमा थिए । जाँदा जाँदै हामीले उनीहरुको अनुभव सोध्ने मौका पनि पायौं ।
नयाँ अवधारणसहित सञ्चालनमा आएको ब्याक टू नेचर रिसोर्टले विदेशी पर्यटकलाई नेपाली गाउँले परिवेशमा रमाउने वातावरण बनाइदिएको छ । ब्याक टू नेचर रिसोर्टका सञ्चालक डम्बर पुन यसको जन्म र अवधारणाबारे के भन्छन् ?
Tags :पर्यटकपर्यटनपाेखराब्याक टू नेचर